Sampan-draharaham-barotra manokana ataon'ny 1100 taratasy mivalona amin'ny aliminioma H14 miorina 900mm - Zhejiang Shuanglin Jiate Teknolojia Teknolojia co., Ltd
Aluminio manodidina ny vidin'ny vidin-tsakafo: Amin'ny alàlan'ny fanampian'ny matihanina manam-pahaizana, azonay natao ny manamboatra, manolotra sy manondrana alim-borona tsara tarehy. Ny faribolan'ny alim-bary natolotr'i antsika dia nanamboatra aluminium avo lenta sy alim-pitandremana mba hitoetra ho tandindomin-doza miaraka amin'ireo fenitra sy rafitra indostrialy. Noho ny endriny toy ny faharetany, ireo mpanjifany aluminio dia ankatoavin'ny mpividy.
Alain'ny faribolana alimini: 1100 1050 1060 3003 5005 5052
Ny hatevin'ny alim-pitaratra: 0.2mm-4mm
Ny lanjan'ny kofehy aluminium: 100mm-1200mm
Isika dia mahomby amin'ny famokarana kalitao Aluminium kalitao ho an'ny mpanjifa. Ireo faribolana dia novolavolaina amin'ny fampiasana fitaovana avo lenta sy fandrosoana teknika avo lenta.
Fine finish polish
Fomba tsara indrindra
Ny maha-renivohitra voalohany indrindra ny indostria, dia voafatotra izahay amin'ny fanomezana faran'ny Aluminium faribolana ho an'ny mpanjifanay manana voninahitra. Ny vokatra azonay dia novolavolain-dry zareo matihanina amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta sy fitaovana tsara indrindra azo avy amin'ny mpivarotra azo itokisana. Noho ny fangatahana avo lenta, ny vokatra azonay dia misy amin'ny fomba maro samihafa.
Aluminium Circle dia nampiasaina betsaka tao anaty kitapo, fitaovam-pikarakarana, Holloware, fanatanjahan-tsakafo, Kitchen Disc, Sakafo, Fryer, Reflector ny fahazavana sns.
Mandeha manao fampirantiana maro manerana izao tontolo izao izahay ary indraindray dia mitsidika ireo mpanjifanay izahay, mba hahafahana manao fifandraisana tsara sy maharitra eo amin'ny raharaham-barotra.
Fampiharana: varavarana & varavarankely, rindrina vita amin'ny rindrina, fanodinana, hafa, fitaovana fanatobiana, Pan
Fanamarinana: ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB, hafa
Fikarakarana fika: Mill Finish
Ambony: Fihodin'ny Mill
Loading Port: Qingdao na Shanghai
Package: hazo palmie
Transport: 20GP na 40 GP
ny takelaka ambanin'ny tany Fry pans Tea kettles
Fanaterana fitaovana fanenana Pizza pans Rice cookers
Restaurant cookware Kafe urns Electric skillets
Bake-fantany Mpanao mofo Stock pots
1. Afaka mandray ny valinteninay ao anatin'ny ora 24 ianao:
2. Manolotra ny vidin'ny fifaninanana tsara indrindra amin'ny serivisy sy serivisy tsara ho anao ianao;
3. Hiseho maimaim-poana ilay ohatra
4. Manana ekipa manana traikefa manan-karena isika ary manome ny fivarotana tsara indrindra - aorian'izay ho anareo.
5. Misy mari-pahaizana sasantsasany
6. Ny vokatray dia malaza any an-trano sy manerana izao tontolo izao.
Aluminium Disc Cookware fitaovana Basin Aluminum Disk miaraka amin'ny Thickness 0.5mm To 3mm
3003 h14 kofehy aliminioma, kodiarana Aluminium ho an'ny pans, Kitapo fidiovana aluminium